आज महाअष्टमीको दिन , शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
यस दिन तपाई आफ्नो साथी समूहसँग रमाईलो गर्नुहुनेछ । मित्रसंग भेटघाट हुनेछ। नया मित्रताको कारण भविश्यमा लाभ हुनसक्नेछ । सन्तानबाट लाभ मिल्नेछ । सरकारी कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ।
यस दिन कामदारहरूका लागि शुभ रहनेछ । नया कार्यको आयोजना सफलतापूर्वक गर्न सक्नुहुनेछ । पदोन्नति पनि हुनसक्नेछ। पारिवारिक जीवनमा मिठास छाउनेछ । तपाइको अधुरो कार्य पुरा हुनेछ। सरकारी लाभ मिल्नेछ।
कुनै पनि नया कार्य सुरुवात गर्नको लागि यस दिन अनुकुल छैन। शरीरमा थकान र आलस्य रहदा कार्य गर्न उत्साह आउदैन। पेट सम्बन्धि रोगले च्याप्नेछ। खर्च धेरै हुनेछ। महत्वपूर्ण कार्यको लागि यस दिन कुनै पनि निर्णय नलिनुहोस।
यस दिन प्रत्येक विषयमा सावधानीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ विवाद नगर्नुहोस। बोली र रिसलाई संयम राख्दा अनिष्ट हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ। धेरै खर्च हुने सम्भावना छ। निषेधात्मक तथा अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनुहोस।
वैवाहिक जीवनमा एक-अपसमा विवादका कारण पति र पत्नी बीच तनाव हुनेछ। जीवन साथीको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्नेछ। सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्रमा कुनै प्रतिष्ठा मिल्नेछैन। यदि सम्भव छ भने, व्यर्थको चर्चा वा विवादमा नपर्नुहोस्। अदालतको काममा सफलता कम हुन्छ।
यस दिन तपाईले आनन्द र सुखको अनुभव गर्नुहुनेछ। घर र कार्यस्थलमा पनि आनन्ददायी वातावरण रहनेछ। सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ। रोगी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। कार्य-सम्पन्नताको कारण तपाईलाई खुसि मिल्नेछ।
तपाइको दिन मध्यम फलदायी हुनेछ। सन्तानको चिन्ताले तपाईलाई सताउनेछ। बहस वा बौद्धिक छलफलबाट टाढा रहनुहोस्। नया कार्यसुरु गर्दा सफल हुन सकिदैन। कुनै एक प्रियजनसंग भेट हुनेछ।
तपाइ आफ्नो दिन शान्त मनले बिताउनुहोस्। चिन्ताजनक मन र अस्वस्थ शरीरले तपाईलाई चिन्तित बनाउँछ। आफन्तहरुसंग विवाद हुन सक्छ। आर्थिक हानि हुने सम्भावना रहेको छ।
नया कार्य गर्नेहरुको लागि यस दिन शुभ रहेको छ। दाजु-भाईसंगको भेटघाटमा वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। भाग्य वृद्धि सम्भावना रहेको छ । कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। सामाजिक दृष्टिबाट मान-सम्मान मिल्नेछ ।
यस दिन तपाइको परिवारसंग झ-गडा पर्न सक्नेछ, त्यसैले आफ्नो रिसलाई संयम राख्नुहोस। शेयरमा पूँजी लगानी व्यवस्थित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययनमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ।
तपाइको दिन शुभ रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिकरुपभाट तपाई प्रसन्न रहनुहुनेछ। भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिबाट तपाई राम्रो अनुभव गर्नुहुनेछ।
यस दिन कुनै पनि लोभ या लालचमा नफस्नुहोस। आर्थिक विषयमा धेरै सावधानी अपनाउनुहोला। ठूला लगानी गर्नु अघि ध्यान राख्नुहोस् । शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रिन सक्नेछ। धार्मिक कार्यमा खर्च हुन सक्नेछ।
प्रकाशित : बुधबार, असोज २७, २०७८०८:१७
भोलि महानवमीको दिन: तपाईको दिन राम्रो-राम्रो कस्तो रहला? हेर्नुहोस् राशिफल!